၁။ အဓိကထုတ်ကုန်များ - အလတ်စား alkaline နှင့် alkaline free glass fiber filter filter (အိတ်) အမျိုးအစားနှစ်မျိုး။
2. အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများ: အပူကုသမှု, ဆီလီကွန်ဆီ, ဖိုက်။
3. အမျိုးမျိုးသောအထူ: 0.3-0.5mm
ပြောင်းပြန်လေအိတ်အိမ်တစ်ခုတွင်ညစ်ပတ်သောလေသည်အတွင်းမှအပြင်သို့စီးဆင်းသွားသဖြင့်ဖုန်မှုန့်သည်အိတ်၏အတွင်းပိုင်းတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။ filter filter အိတ်များသည် tubular ဖြစ်ပြီးအောက်ခြေတွင်ပွင့်သည်။ ပြွန်စာရွက်နှင့်ချိတ်ထားသည်။ သူတို့ကထိပ်ကနေ spring or J-bolt system ကနေတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ filter အိတ်သန့်ရှင်းရေးကိုစတင်ရန်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်သည်။ ပြောင်းပြန်လေသန့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်အိတ်များ၏စုစုပေါင်းပြိုကျမှုကိုကာကွယ်ရန်အပြန့်ကျဲအကွင်းများကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်သို့ ၃ မှ ၄ ပေကြားခွဲထားသည်။ စစ်ထုတ်သည့်အိတ်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင် off-line စနစ်ဖြင့်အခန်းတစ်ခန်းစီသန့်ရှင်းသည်။
Reverse Air Filter Bag အတင်းအတင်း
၅၀ ပေါင် (Polyester)
75 ပေါင် (ဖန်မျှင်ထည်)
Polyester filter ကိုအိတ်
Reiber Fiberglass filter ကိုအိတ်
ဖန်မျှင်ထည်စစ်ထုတ်သည့်အထည်ကိုဖိုက်ဘာမှန်ချည်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အခြားဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကုသမှုများအတွက်ဖိုက်တာ၊ ဆီလီကွန်၊ စက်မှုဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေး,ရိယာ၊ အိတ်အိမ်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်အဖိုးတန်ဖုန်မှုန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့တွင်ဖိုက်ဘာမှန်စစ်အိတ်များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။
နောက်ဖက်ဖိုက်ဘာမှန် filter filter ကအများအားဖြင့် 450gsm မှ 550gsm fiberglass filer ထည်ကိုအသုံးပြုသည်။
၂၈၀ ဒီဂရီအောက်ရှိအပူချိန်အောက်တွင်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ၁။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၂။ ဖုန်ကောင်းသောအမှုန့်များ၊ ပြာဖယ်ရှားမှုအတွက်စွမ်းအင်နိမ့်စွာသုံးစွဲမှု။
3. Fiberglass filter အိတ်များ၏အရွယ်အစားမှာပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးအပူချိန်မြင့်မားသောကြောင့်ဖိုင်ဘာကျုံ့ခြင်းမရှိပါ။
(၄) ကောင်းမွန်သောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်အက်ဆစ်ပြင်းအားအက်စစ်နှင့်ပြင်းထန်သောအယ်ကာလိုင်း မှလွဲ၍ အခြား filter medium များထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။
၆။ ဖိုက်ဘာမှန်စစ်အိတ်၏စီစစ်ခြင်းက ၉၉.၅% ကျော်နိုင်ပြီး PM6 အောက်ရှိဖုန်မှုန့်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ 99.5mg လေထုထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။
ဖိုက်ဘာမှန်စစ်သည့်အထည်၏ 7.High strength သည် 3000N /5* 20cm ရှိနိုင်ပါသည်
အိတ် venturi filter